Ilay voromailala avy any an-danitra
« Ary Jaona nanambara ka nanao hoe: Izaho nahita ny Fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. » Jao.1:32.
I Kristy no ohatra ho antsika amin’ny zavatra rehetra. Nisokatra ny lanitra ary nidina avy any an-danitra ny Fanahy Masina, tahaka ny voromailala, ary nitoetra teo Aminy, ho valin’ny vavaka nataony tamin-dRainy. Natao hifandray amin’ny olombelona ny Fanahy Masin’Andriamanitra, ary mitoetra ao am-pon’ireo olona mpankatò sy mahatoky. Hahazo fahazavana sy hery izay olona mikatsaka fatratra izany, mba hananany fahendrena hanoherana an’i Satana, ka handreseny amin’ny fotoana hisian’ny fakam-panahy. Natao handresy tahaka ny nandresen’i Kristy isika.
Tamin’ny alalan’ny vavaka mafana no nanombohan’i Jesôsy ny asa nanirahana Azy teo anivon’ny vahoaka, ary asehon’izany ohatra nomeny izany fa ilaina ny mivavaka mba hananana fiainana kristianina mahomby. Nifandray tsy tapaka tamin’ny Rainy Izy, ary ny fiainany dia maneho amintsika ohatra tonga lafatra izay tokony halaintsika tahaka. Nankasitrahany ny tombontsoan’ny fivavahana, ary hita tamin’ny asany ny vokatry ny fifandraisany tamin’Andriamanitra. Rehefa mandinika ny fiainany isika, dia mahita fa rehefa azony natao, dia lasa Izy nisintaka nankany an-tendrombohitra Oliva na nandeha nitokana tany an-tendrombohitra, ary nanandratra vavaka mafana sy feno faharetana tamin’Andriamanitra. Matetika Izy no manokana alina manontolo mba hivavahana, mialoha indrindra ny niantsoana Azy hanao fahagagana lehibe. Nandritra ireny fotoam-bavaka tamin’ny alina ireny, taorian’ireo asa mafy nataony nandritra ny andro, dia tamin’ny fo feno fangorahana no nandefasany ny mpianany hody, handeha hamonjy ny fonenany mba hahafahan’izy ireo miala sasatra sy matory, fa Izy kosa nanandratra vavaka tamin-kafanam-po sy tamin-dranomaso, nitaraina tamin’Andriamanitra ho an’ny taranak’olombelona.
Efa vonona sy niomana ny hanao adidy i Jesôsy, ary efa nahazo hery hiatrehana ny fitsapana, noho ny fahasoavan’Andriamanitra izay tonga tao Aminy ho valin’ny vavaka nataony. Mila miantehitra amin’Andriamanitra isika mba hahomby eo amin’ilay fiainana kristianina izay diavintsika. Ny ohatra nomen’i Kristy eo anoloantsika no manokatra ny lalana izay mety hahatongavantsika eo amin’ilay loharanon-kery tsy mety ritra, izay hanovozantsika fahasoavana sy hery hanoherana ny fahavalo ary hivoahantsika ho mpandresy. Nanandratra vavaka i Kristy teo amoron’ny ony Jôrdàna, amin’ny maha-solontenan’ny taranak’olombelona Azy, ary ny fisokafan’ny lanitra sy ilay tenim-pankasitrahana dia manome toky antsika fa manaiky ny taranak’olombelona Andriamanitra amin’ny alalan’ny fahamendrehan’ny Zanany Lahy. – ST, 24 Jol. 1893.